खोई, तीन सयवटा विद्युतीय बस ? - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > नेपाल समाचार > खोई, तीन सयवटा विद्युतीय बस ?
June 28, 2019 June 28, 2019 GRISHI404
महासेठ निकट सूत्रका अनुसार तीन सय चिनियाँ बस सरकारलाई भिडाउन एउटा गिरोह सक्रिय भएर लागेको छ । उक्त गिरोहको सल्लाह अनुसार सरकारले ‘जिटुजी’ मार्फत तीन सयवटा बस चीनबाट ल्याउन खोजिएको हो । यदि सरकारले पारदर्शी रुपमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने हो भने टेण्डरका आधारमा खरिद गरिनुपर्ने हुन्छ । टेण्डरमा खरिद गर्दा कमिशन नआउने भएकोले मन्त्री महासेठले ‘जिटुटी’ बाट खरिद गर्ने कुरा गरेका हुन् । यद्यपि, तीन सय वटा बस टेण्डरबाट खरिद गर्ने कि बिचौलियामार्फत् ‘जिटुजी गरेर ल्याउने भन्ने टुंगो सरकारले गरेको छैन । यदि ‘जिटुजी’को माध्यबाट खरिद गरिएमा त्यसमा भ्रष्टाचारको ठूलो गन्ध आउने छ । नेपालमा पहिलोपटक भित्रिएको चिनियाँ बीवाईडी कम्पनीको बसलाई आउन नदिन बिचौलियाहरुले ‘जिटुजी’को बाटो अवलम्वन गरिएको स्रोत बताउँछ ।
नेपाल सरकारले पनि आजैदेखि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेन भने नेपाल भारतीय गाडीको डम्पिङसाइट नेपाल बन्ने कुरामा दुईमत छैन । अबको १० वर्ष पछाडि भारतले पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनको उत्पादनमा रोक लगाएपछि ती सवारीसाधन नेपाल भित्रने कुरामा शंका छैन । नेपाललाई भारतीय गाडीको डम्पिङसाइट बनाउने कि प्रदुषणमुक्त देश बनाउने भन्ने कुरामा सरकारले अहिलेदेखि ‘होमवर्क’ गरेन भने व्यापारघाटा भन्दा डरलाग्दो रोग अर्थात् पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारी साधनको डम्पिङसाइट नेपाल बन्ने खतरा छ ।
नेपालले एमसीसी अनुदान गुमाउन सक्ने राजदूत बेरीको चेतावनी
February 20, 2021 GRISHI